Xasan Shire: Waxaa socda dhabar jebin lagu hayo saxaafadda - BBC Somali
Xasan Shire: Waxaa socda dhabar jebin lagu hayo saxaafadda
Dowladda Soomaaliya ayaa xilkii ka xayuubisay Agaasimihii Hay'adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya C/laahi Maxamed Cali (sanbaloolshe), taasi oo sabab looga dhigay u shaqadiisi gudan waayay. Abdullahi Mohamed Ali waxa uu xilka hayay muddo ka yar laba bilood.
Arrintan waxay ka dambeysay maanta markii laba idaacad oo gaar loo leeyahay oo magaalada ku yaal ay dowladdu xirtay, kuwaasi oo sii daayay warar ku saabsan hoggaanka cusub ee al-Shabaab.
Hey'adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda weriyayaasha ayaa ku eedeeyay dowladda inay caburineyso saxaafadda.
Xasan Shire Shiikh waa Madaxa hey'adda difaacda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika, isaga oo oo jooga agaalada Kampala ayaa Farxaan Maxamed Jimcaale wareystay oo uu weydiiyay sida uu u arko.